Ogaden News Agency (ONA) – Kenya oo Masaafurisay Garsoore Caan Ah.
Kenya oo Masaafurisay Garsoore Caan Ah.
Posted by ONA Admin	/ February 8, 2018
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay masaafurisay siyaasi caan ah oo xabsiga mucaaradka ah ku jiray kaas oo lagu magacaabo Miguna Miguna. Miguna oo u dhashay dalka Kenya ayaa loo tarxiilay dalka Canada maadaama uu heysto jinsiyadda dalka Canada, halkaas oo diyaarad loo saaray shalay.
Dowladda Kenya ayaa Miguna kusoo oogtay dacwad khayaano qaran ah, kadib markii uu ka qeybqaatay dhaarintii hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Migunaayaa laga waayay maxkamaddii la filayay in lasoo taago, iyada oo amar maxkamadeed oo soo baxay uu dowladda ku wargaliyay in maxkamadda la horkeeno Miguna Miguna.
Balse booliiska ayaa ninkan geeyay maxkamad ku taala magaalada Kajiado oo 80 km u jirta Nairobi, balse garsoorihii maxkamada ayaa diiday in uu dhagaysto dacwada, wuxuuna sheegay in ay tahay in la geeyo maxkamadda Nairobi.